कस्ता बिरामीले खान हुँदैन मासु ? - Birgunj Sanjalकस्ता बिरामीले खान हुँदैन मासु ? - Birgunj Sanjalकस्ता बिरामीले खान हुँदैन मासु ? - Birgunj Sanjal
१७ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०६:५३
मासु पकाउँदा पनि धेरै मसला, चिल्लो राखेर भन्दा पनि साधारण तरिकाले पकाएर खानुपर्ने डा. उप्रतीको सुझाव छ। उनकाअनुसार बढी मसलेदार मासु, धेरै दिनको बासी मासु, राम्ररी नपाकेको मासु खाँदा अपच हुने, बान्ता हुने, आउँ, हैजाजस्ता समस्या निम्तिन्छ। यसकारण मासुलाई ताजा राख्नका लागि फ्रिजमा राख्नुपर्छ।
मुटुरोग, युरिक एसिड लगायतका दीर्घरोगीलाई मासु घातक मानिन्छ । अझै दीर्घरोगीले मासु खानु विष सेवन गरेसरह नै हुने डा. उप्रेतीले बताइन्। त्यसैले दीर्घरोगीले मासु सेवन नगरेकै उत्तम हुन्छ। तेलमा भुटेको, तारेको, सेकुवा र मसलेदार मासु खानु शरीरका लागि झनै हानिकारक हुने डा. उप्रेतीले बताइन्। नेपालमा दिनानुदिन दीर्घरोगी बढ्नुका कारण पनि अस्वस्थकर खाना नै भएको चिकित्सकहरु बताउँछन्।
मासुको गुणस्तर कस्तो हो, नबुझी खाँदा शरीरमा समस्या निम्तिन्छ । अमिलो र नमीठो गन्ध आएको छ भने त्यस्तो मासु खान हुँदैन । प्याजी रंगको मासु मात्रै खान योग्य हुने डा. उप्रेतीले बताइन् । उनकाअनुसार बजारमा झुन्डाएर राखिएको मासु हल्का गुलाबी रंगको छ भने त्यसमा सचेत हुनुपर्छ । पसलमा झुन्ड्याएर खुला रूपमा राखिएको मासुमा ब्याक्टेरियाको संक्रमण धेरै हुने डा. उप्रेतीले बताइन् । अस्वस्थ मासुको सेवनले स्वस्थ मानिस समेत बिरामी हुने सम्भावना रहने भन्दै डा. उप्रेतीले दीर्घरोगी झन् खतरामा जाने बताइन् । खानामा सन्तुलन मिलाउनुका साथै अभ्यासलाई पनि ध्यानमा राख्न जरुरी हुने डा. उप्रेतीको सुझाव छ । उनले दशैंका लागि खसि किन्दा सिंगान बगेको चिकित्सकले स्वस्थ्य छ भनेर चिन्ह नलगाएको अस्वस्थकर हुने बताइन् ।
उनकाअनुसार त्यस्तो मासुले पाचन प्रक्रियालाई राम्रो गर्दैन । दशैंमा मीठो बनाउनु पर्छ भन्दै अनावश्यक मरमसला हाल्न तिर लाग्न नहुने डा. उप्रेतीको सुझाव छ । उनले मासु बनाउँदा हरेक कुरा कम गर्नुपर्ने बताइन् । जस्तैः नुन, मसला तेल । मासु पकाउँदा सामान्य तरिकाले पकाउनु उत्तम हुन्छ ।